Rankizy malala ! Miharihary amintsika tsara ary izao , rehefa notsikafonintsika sy narindrantsika avy ao anatin’ny “Baiboly” ireo “Sokajinà-Voambolana momba ny Tontolo Iainana”, fa tena “Andriamanitry ny Zava-Kanto sy ny Fahatsarana Rehetra Andriamanitra” Tsy vitan’ny hoe : “Niteny fotsiny Izy” dia nisy izao rehetra izao , fa nisy mihitsy ny “Fihosinkosenana mafy” , tahaka ny ankizy madinika any Ambanivohitra , milalao Tanimanga, nanao kisarisarin’omby, na kisarisarin’olona . “Tena nihosim-potaka Andriamanitra” tamin’ny Namolavolany ny”Olona Voalohany”= Adamah = Adama ( Tany = Fotaka = Tanimanga ) sy Havah = Eva ( Aina = Fahavelomana = Fisian’Aina ) .
“Andriamanitra Mahagaga tokoa ny Andriamanitra Ivavahantsika” Rankizy” !
‘Ndeha ange iverenantsika kely indray Rankizy ny amin’ ny “Nahariana Farany ny Olona” ka tsy maintsy “Nahatamana Azy Ireo” teo amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy mba honenany ê ! :
Vonona ny Lanitra sy ny Tany , sy ireo rehetra momba azy
Vonona avokoa ara-pitaovana ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy .
Nisy ny Rivotra Madio nahazoany niaina an-kalalahana , nisy Hafanana sy Hatsiaka .
Nisy ireo Fizaran-taona samihafa , niovaovan’ny fandrindràny ny fiainany sy ny asany .
Nisy Karazan-java-maniry maitso sy nilenodenoka nanodidina ny fonenany .
Nisy ny Karazan’Anana nanohanana azy tamin’ny fikarakarany ny Sakafony .
Nisy Karazam-boninkazo namerovero sy tsara loko tetsy sy teroa nampifaly ny sainy .
Nisy Voro-manidina – Karazam-biby neti-ho namany sy niarahany nisangy .
Nisy Masoandro sy Hazavana , nahazoany niasa sy namokatra tamim-pifaliana .
Nisy Alina nahazoany niala sasatra sy Tori-masom-piadanana nilamina tsara ..
Nisy Rano Fisotro Madio sy mamy , azony nisotroana sy nidiovana ary nikarakarany ny sakafony , ary ny Ranomasina nahazoan sira hitahirizan-tsakafo sy hanatsarany ny tsiron-
Nisy Voankazo Fihinam-boa be Otrik’aina nangalany hohanina hamelomany ny vatany.
Nisy Karazana Hazandrano azo nosakàina hatao laoka sy sakafo koa.
Nisy ny Voro-manidina samihafa nanidintsidina sy nisiontsioka teny rehetra teny .
Nisy ireo Biby Vaventy sy Antonontonony fanao Fanatitra ho Fisaorana sy Fankasitrahana an’ Andriamanitra antom-pisiany taty aoriana , tamin’ireo Biby Madio , sns…sns…
Nisy daholo ny zavatra rehetra nanodidina azy mivady , ka niteraka” Fifaliana sy Fahafinaretana” ho azy, ary dia nilomano tao anatin’ny “Tena Fiadanana”, “Filaminana” ,
“Fandriam-pahalemana” izy .
“Tontolo Iainana” mahafinaritra teo ambany “Fitondrana sy Fikarakana ary Fanaraha-mason’ Andriamanitra” no nisy ireo “Ray Aman-dReny Voalohany” ireo .
Noho ny fisian’ ireo rehetra ireo ary , dia tsy tokony ho gaga amin’izay ‘Ianareo Rankizy , fa “Tena Tamàna tanteraka” teo amin’ny “Toerana sy Fonenana” nametrahan’Andriamanitra azy tokoa izy , fa tsy toy izay nolazaintsika tary aloha hoe “Tsy Tamàna izy mivady” raha ilay “Tany Ngazana”, “Tany Foana” no nonenany arak’ireo hitantsika tamin’ny Toko 1.1 hatramin’ ny Toko 2 ireo .
“Tamàna” ary izy izao Rankizy , satria “Tontolo Iainana Tonga Lafatra” , “Ari-fomba” , no nametrahan’ “Andriamanitra Nahary Tongotra Aman-Tanana” azy honenany !
Tena mahazendana indrindra izany Rankizy !
Mirary soa ho anareo Ankizy sy Tanora namolavolana izao “Voambolana momba ny Tontolo Iainana” izao , hiditra an-tsehatra , amim-pifaliana sy amim-pikirizana ary amim-pahazotoana hamaky sy handinika ny “Tenin’ Andriamanitra Fiainan’Izao Tontolo Izao” .
Hambomba fitahiana mandrakariva ho anareo anie Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra ! Aoka hatoky Azy ‘Ianareo !